Tag: marina amin'ny interactive | Martech Zone
Tag: marina amin'ny interactive
Talata, Jona 17, 2014 Talata, Jona 17, 2014 Douglas Karr
Betsaka ny fisafotofotoana eo amin'ny Internet androany momba ny atao hoe automatique marketing. Toa izay orinasa mahita ny fomba fandefasana mailaka miorina amin'ny hetsika iray nateraka dia miantso ny tenany ho automatisation marketing. Nianarantsika tamin'ny mpanohana ny automatisation marketing antsika, Right On Interactive, fa misy ny mampiavaka azy manokana amin'ny rafitra automatique marketing izay tokony hotadiavin'ny mpivarotra rehetra: Data - ny fahaizana manangona angona, na amin'ny alàlan'ny endrika,
Talata, Jona 10, 2014 Saturday, May 7, 2016 Douglas Karr
Mandresy, mitazona, mitombo… izany no mason'ny orinasam-pivarotana automatique Right On Interactive. Ny sehatry ny automatisation marketing azy ireo dia tsy mifantoka amin'ny fahazoana fotsiny - mifantoka amin'ny androm-piainan'ny mpanjifa izy ireo ary mahita ny mpanjifa mety, mitazona ireo mpanjifany ary mampitombo ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa ireo. Mahomby kokoa noho ny fikarohana tsy misy farany ny fitarihana izany. T2C dia nametraka an'ity infographic ity izay nametraka fanontaniana lehibe iray, maninona isika no tsy manangana ny departemantan'ny marketing eto amintsika? Fa maninona isika?
Holger Schulze sy ny bilaogy Every Technology Marketing dia nanao fanadihadiana momba ny mpivarotra B2B tao amin'ny Community Community Marketing B2B tao amin'ny LinkedIn. Nangataka tamin'i Troy Burk, tale jeneralin'ny Right On Interactive - sehatr'asa mandeha ho azy ara-barotra izay voatondro ho mpitarika eo amin'ny sehatry ny indostria aho - mba hanome valiny momba ny valin'ny fanadihadiana. Vita soa aman-tsara ny fanadihadiana ary manome metrika tsara momba ny fomba hampiasan'ny vondron'ny mpivarotra B2B automatique marketing. Kudos